Sidina izay mbola miasa ao amin'ny Bangkok Airways - Thailand Breaking News
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Sidina izay mbola miasa ao amin'ny Bangkok Airways
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Travel Wire News
Noho ny fampandrenesana vao haingana nataon'ny Ivotoerana Thailande an'ny COVID-19 Situation Administration (CCSA) momba ny famerana ny fivezivezena any Thailand, Bangkok Airways Public Company Limited dia nanambara ny fanafoanana vonjimaika ny sidina anatiny sasany nandritra ny vanim-potoana 13 - 31 Jolay 2021.
Bangkok - sidina Samui (mandeha an-dalambe) sidina 2 isan'andro
Sidina sidina misy tombo-kase eo anelanelan'ny Bangkok sy Samui, izay handraisana mpandeha amin'ny fifamoivoizana iraisam-pirenena (sidina 3 isan'andro)
Samui - sidina 4 Phuket (zotram-piaramanidina) sidina 16 isan-kerinandro (Alatsinainy, Alarobia, Zoma ary Alahady), ireo sidina ireo dia azo atao manomboka ny 2021 Jolay XNUMX mandroso
Tamin'ny herinandro lasa teo dia voalaza fa Bangkok, ny Bangkok, tanànan'ny anjely dia eo ambany fiakaran'ny COVID-19 hafa.
Androany Bangkok Airways dia naneho hevitra ary nanafoana ireto sidina anatiny ireto:
1. Bangkok - Chiang Mai (mandeha amin'ny lalana)
2. Bangkok - Phuket (fitsangatsanganana)
3. Bangkok - Sukhothai (mandeha amin'ny lalana)
4. Bangkok - Lampang (mandeha an-tongotra)
5. Bangkok - Trat (fivezivezena)
Samui - Singapore (zotram-piaramanidina) sidina 3 isan-kerinandro (Alatsinainy, Alakamisy ary Alahady), ireo sidina ireo dia ho azo manomboka amin'ny 1 Aogositra 2021 mandroso.
Bangkok Airways Public Company Limited dia zotram-piaramanidina rezionaly monina any Bangkok, Thailand. Izy io dia miasa amin'ny serivisy voatendry any amin'ny toeran-kaleha any Thailand, Kambôdza, Sina, Hong Kong, India, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Singapore, ary Vietnam. Ny ivon-toerany lehibe dia ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi.
Ireo mpandeha izay kasaina hivezivezy alohan'ny 31 Jolay 2021 dia afaka mahazo saram-pialana amin'ny famerenanana indray na raha tsy izany dia mety hangataka famerenam-bola amin'ny endrika taratasy fampandehanana dia ampiasaina amin'ny tapakila amin'ny ho avy. Ireo mpandeha dia afaka manao fanovana ilaina hatramin'ny 24 ora alohan'ny sidina. Ny fampahalalana bebe kokoa dia azo jerena ao amin'ny www.bangkokair.com/travel-voucher (mihatra ny fepetra sy ny fepetra).
Ireo mpandeha izay maniry hanitsy ny diany tsy misy daty fitsangatsanganana vaovao (tapakila misokatra) dia afaka mandefa ny fangatahany amin'ny alàlan'ny https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L ao anatin'ny 24 ora alohan'ny daty fiaingana natolotra. Hampiasa fampahalalana omena amin'ny alàlan'ny endrika toy izany ny zotram-pitaterana an'habakabaka mba handraisana bebe kokoa ny mpandeha.
Afaka mifandray amin'ny zotram-pifandraisana ireto mpandeha ireto amin'ireto fantsona manaraka ireto;
Call Center: Tel. 1771 sy 02-270-6699 (mandritra ny 8 maraina - 8 hariva)
Ireo mpandeha izay namandrika ny tapakilan-dry zareo tamin'ny alàlan'ny masoivohon'ny dia dia nanoro hevitra azy ireo hifandray mivantana amin'ny maso ivoho mba hikarakarana bebe kokoa.
Ambonin'izany, ny zotram-piaramanidina dia mamporisika ny mpandeha hanara-maso ny fampandrenesana, ny baiko ary ny fomba fizotry ny dia, ho an'ny toerana tsirairay alohan'ny fitsangatsanganana ataon'ny manampahefana mifandraika amin'izany:
Ivotoerana fitantanan-draharaha COVID-19 (CCSA)
Seranam-piaramanidin'i Thailand www.airportthai.co.th/en/
Departemantan'ny seranam-piaramanidina www.facebook.com/DepartmentOfAirports/